Dagaal Laba Beelood ku Dhexmaray Tuulada Kamarooyaan ee Dhulka Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
May 7, 2009 Somali Ogaden
Dagaalka ayaa dhacay maalintii Isniinta oo ka bilowday daandaansi dhexmaray dad ka soo kala jeeda labada beelood ee Reer Haaruun iyo Ciidagale, oo ka soo kala jeeda Ogadeen iyo Isaaq waa sida ay u kala horeeyaane.
Labada beelood oo ay oodu u kala rogan tahay ayaan waligoodba nabad waartaa dhex marin ee uu khilaafkoodu joogta yahay sida caadada u ah dadka Somalida ah ee degaanada wadaaga oo aan nabadi ka dhaxaynin.
Colaada beelahan ayaa waxay dabada ku haysaa dhul daaqsimeedka iyo ceelasha biyaha laga cabo, inkasta oo ay sanooyinkii ugu dambaysay ay colaadu dabada saaraysay arimo siyaasadeed oo ayna reer miyigu shaqo ku lahayn.
Beesha ciida gale ayaa waxaa dabada ka soo riixa oo ideecadahana laga waraystaa dad isku sheega in ay siyaasiin yihiin oo degan dalka dariska ah ee Somaliya. Waxayna Siyaasiyiinta Waqooyiga Somaliya had iyo goor nacalad dusha kaga tuuraan oo ay wax walba u xambaariyaan ururka ONLF oo isagu la dagaalama Itobiya.
Si kataba ha ahaatee khasaare xoog leh ayaa laga soo sheegayaa dagaaldii ka dhacay Isniintii Tuulada Kamaraayaanka. Waxaan noo suurto galin wali in aan helo khasaaraha dhabta ah ee uu keenay dagaalkani, In kasta oo ay gurmad dhexdhexaadin ah laga diray Magaalada Jijiga.
Rasaas runta ugu imo